Swe Zin Myo Win – Myanmar Biodiversity
About Swe Zin Myo Win
So far Swe Zin Myo Win has created 16 blog entries.
ကျိန္တလီချောင်းနံဘေးက ဘေးမဲ့တော၏ ကင်းစခန်းသို့ စက်လှေဆိုက်ကပ်ချိန်တွင်ပင် တော၊တောင်တို့၏ ရနံ့ သစ်များကို ရှုရှိုက်နေရပြီ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှ တဲသုံး၊ လေး လုံးဖြင့် စခန်းကို ချောင်းကမ်းစပ်က မြင် နေ ရ သည်။ ဘေးပတ်လည်မှာတော့ တောတွေ၊ တောင်တွေက စိမ့်ညို၍ ၀န်းရံထားလျက်။ ဂွမြို့မှ ရတနာမြိုင်ကျေး ရွာသို့ ကားဖြင့် ၃၃မိုင်။ ယင်းကျေးရွာမှ သည်ကင်းစခန်းသို့ ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် စက်လှေဖြင့်် ၁၃မိုင် စီးရပြီး လျှင် ကျွန်တော်တို့ စခန်းချမည့် ဘေးမဲ့တောအစပ်ကို ရောက်ပါပြီ။ https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/posts/1585411858218362 ဤနေရာကား အနီးဆုံး ကျေးရွာနှင့်ပင် ၁၀ မိုင်ကျော်ကျော် ကွာဝေးသည်။ ကင်းစခန်းက ဘေးမဲ့တောကြီး၏ နယ်နိမိ တ်အစတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ကင်းစခန်းနာမည်မှာ ကြိမ်ခါးခုံကင်းစခန်းဖြစ်ပြီး ရခိုင်ရိုးမဆင်ဘေးမဲ့ တောကြီး၏ [...]
By Swe Zin Myo Win| 2018-03-28T15:10:39+00:00	March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments
သန့်ရှင်းသော ပျံသန်းသူ သို့မဟုတ် လင်းတ မြီးရင်ဖြူ
''လင်းတမှိုင် မှိုင်သည်''၊ ''စာသူငယ်ကြား လင်းတ နားသကဲ့သို့'' စသဖြင့် သူတို့ကို ''လန်းဆန်းတက်ကြွမှု မရှိခြင်း''၊ ''ကြီးမား၍ အကျည်းတန်သော ငှက်''အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုကြသည်။ အပုပ် အသိုးနှင့် အသေကောင်တို့ကို စားသောကြောင့် အောက် လမ်း၊ မကောင်းဆိုးရွား စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော ''ငှက်'' အဖြစ်လည်း လူတွေက ကြောက်လန့်ရွံရှာကြသည်။ ''ကျက်သရေမင်္ဂလာမရှိသော ငှက်''အဖြစ်လည်း သတ် မှတ်ထားကြသည်။ ထိုငှက်ကိုပင် မြန်မာအများစုက အတိတ်ဆိုး၊ နိမိတ် ဆိုး၏ ရှေ့ပြေးအဖြစ် ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း လက်ခံ ယုံကြည်ထားကြသည်။ ဆိုရလျှင် အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုး ခြင်း၊ မကောင်းသော အိပ်မက်မက်ခြင်း၊ ငှက်ဆိုးထိုး ခြင်း၊ ရွာအတွင်းသို့ တောတိရစ္ဆာန်ဝင်ခြင်းများကဲ့သို့ပင် ထိုငှက်တို့ ခေတ္တလာရောက်နားခိုပါက ''အတိတ်နိမိတ် ဆိုး''အဖြစ် [...]
By Swe Zin Myo Win| 2018-03-28T14:56:08+00:00	March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments
လိပ်သုတေသနလုပ်ရန် Global Mapper မှ သံလွင်မြစ်၏ ပထဝီဝင်မြေမျက်နှာပြင် အ နေအထားကို ကြည့်လိုက်သောအခါ စိတ်လွန်း၊ကျဉ်းလွန်းနေသော ကွန်တိုမျဉ်းများကို တွေ့ရသဖြင့် မြင့်မား သောတောင် တန်း၊ တောင်ကုန်းတွေကြားမှဖြတ်စီးနေသော မြစ်တစင်းပါလားဆိုသည်ကိုသိ လိုက်သည်။ ဤ သို့သောအ ခြေအနေမျိုးများကို ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်အောက်ပိုင်းနှင့်ရွှေလီ မြစ်အထက်ပိုင်းတွေ့ကြုံခဲ့သဖြင့် သံလွင်မြစ် မြစ်ညာမှ သည် မြစ်ဝအထိမည်သည့်နည်းနှင့်မျှစုံဆင်းနိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ Design Printing Services တဖန် Co., LTD.ထုတ် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမြေပုံ စာ အုပ်တွင်ပါသော ရှမ်းပြည်နယ် မြေပုံကို ဖြန့် ကြည့် လိုက် ပြန်ရာမြစ်ညာမှအောက်သို့ကြည့်သော် လောက်ကိုင်၊ ကွမ်းလုံ၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရှုး၊ ကွန်ဟိန်း၊ တာကော်၊ ကျိုင်း ခမ်း၊ ကျိုင်းတောင်း၊ တာဆန်း၊ ဖါးဆောင်း၊ ဖါပွန်၊ မြိုင် [...]
By Swe Zin Myo Win| 2018-01-02T14:31:14+00:00	January 2nd, 2018|Wildlife, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments
The clouded leopard Neofelis nebulosa isapotent ambassador species for conservation, occurring from the Himalayan foothills eastwards to Indochina, between which Myanmar isabiogeographical land bridge. In Myanmar's Northern Forest Complex, the species co-occurs with the tiger Panthera tigris, leopard Panthera pardus, marbled cat Pardofelis marmorata, golden cat Catopuma temminckii and leopard cat [...]
By Swe Zin Myo Win| 2017-11-28T17:30:55+00:00	November 28th, 2017|FFI, Mammals, WCS Myanmar|0 Comments
Vacancy Announcement – Field Officer (Re-opened until 18th Octorber 2017)
URGENT OIKOS_Field-Officer Title: Field Officer Duty Station: Lampi Marine National Park – Myeik archipelago, Tanintharyi Region Duration: 8 months (October 2017-May 2018) Deadline for applications: 18th Octorber 2017 (Re-opened)
By Swe Zin Myo Win| 2017-10-12T12:44:54+00:00	October 12th, 2017|Uncategorized|0 Comments
Conservation Internship in Myanmar
Intern on biological survey, monitoring and community engagement in the Kachin, Sagaing, Rakhine Scapes and receive career development opportunities (October 2017/ January 2018) Conservation Internship30 September2017_Degree Change Period Up to2-3Months Oct – Dec 2017 Jan – Mar 2018
By Swe Zin Myo Win| 2017-09-15T15:31:19+00:00	September 15th, 2017|Uncategorized|4 Comments
ကျွန်တော်တို့ ကုသမပေးနိုင်သော တောကောင်တွေရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များ
သက်ရှိတိုင်းတွင် ခံစားတတ်သော နှလုံးသား ရှိပါသည်။ ခံစားတတ်သည့် နှလုံးသားများ ရှိသည်နှင့်အညီ ဘ၀တွင် နာကျင်ရသည့် အခိုက်အတန့်များကြောင့်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာ ရမှုများ ရှိတတ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် လူသား၏ ခံစားမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာရမှုတို့ကိုသာ အလေးထားလေ့ရှိပြီး တိရစ္ဆာန်များ၏ ခံစားမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လျစ်လျူရှုတတ်ကြ၊ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေတတ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိယုံမက၊ စိတ်ဒဏ်ရာလည်း ရနိုင်ပေသည်။သက်ရှိတိုင်းတွင် ခံစားတတ်သော နှလုံးသား ရှိပါသည်။ ခံစားတတ်သည့် နှလုံးသားများ ရှိသည်နှင့်အညီ ဘ၀တွင် နာကျင်ရသည့် အခိုက်အတန့်များကြောင့်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာ ရမှုများ ရှိတတ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် လူသား၏ ခံစားမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာရမှုတို့ကိုသာ အလေးထားလေ့ရှိပြီး တိရစ္ဆာန်များ၏ ခံစားမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လျစ်လျူရှုတတ်ကြ၊ [...]
By Swe Zin Myo Win| 2017-09-08T17:15:26+00:00	September 8th, 2017|Mammals, Threats, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments
သတင်းပေးပါ ကြိုးကြာ သို့မဟုတ် ကြိုးကြာခေါ်သံ
ကြိုးကြာငှက်သိုက်တစ်ခုကို ရေနက်ကွင်း၊ နတ်စပါးတောထဲရှိ မြက်ကလုံးပင်များပေါ်တွင် ကြိုးကြာဥ နှစ်လုံး ဥထားသည်ကို ကိုစောမျိုးက လိုက်ပြသည်။ ကိုစောမျိုးက ထိုကြိုးကြာအသိုက်ကို ၀မ်းရေးအတွက် မြုံးထောင်း သွားရာက တွေ့ရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ “မြုံးထောင်းသွားရင်းနဲ့ ဒီအသိုက်ကို ကျွန်တော် တွေ့ထားတာပါ။အဲဒါနဲ့ တင်မြ( သူ့ ဇနီး) က ဆရာတို့ ဟောပြောပွဲသွားနားထောင်းရင်းနဲ့ ကြိုးကြာအသိုက်တွေ့ရင်း သတင်းပေးဖို့ ပြောတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် သတင်းပေးတာ” ဟု ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ကြိုးကြာငှက်မကြီးကို ကြည့်၍ အသက် ၃၂အရွယ်ရှိ ကိုစောမျိုးက ကျွန်တောတို့အဖွဲ့ကို ပြောသည်။ ကြိုးကြာငှက်မျိုးစိတ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် မျိုးစိတ်များစွာရှိသော်လည်း ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်း ပေါ် ဒေသရှိ ကြိုးကြာခေါင်းနီငှက်မျိုးစိတ်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်လည်း မျိုးသုဉ်းမှု အန္တရာယ်ကျရောက်နေသော မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ငှက်မျိုးစိတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်ရေ [...]
By Swe Zin Myo Win| 2017-08-25T11:03:37+00:00	August 25th, 2017|Upper Ayeyawady, Wildlife, Ayeyawady River, Birds, Threats, WCS Myanmar|0 Comments
Grave concern over the future of Myanmar’s wild elephants as skin trade targets mothers and calves
YANGON (8th August, 2017): On World Elephant Day, national and international conservation organisations expressed grave concern about the plight of Myanmar’s declining wild elephant population followingasurge in demand for their skin. “Unlike ivory poaching, which targets tusked males, the sudden increase in the demand for skin means the killing is indiscriminate with mothers [...]
By Swe Zin Myo Win| 2017-08-11T17:01:27+00:00	August 11th, 2017|FFI, Mammals, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments